विदेशको कमाइ बिर्सायो च्याउको आम्दानीले अनि त्यागे विदेश जाने सपना ! – Halkhabar kura
५ माघ २०७७, सोमबार १०:११
विदेशको कमाइ बिर्सायो च्याउको आम्दानीले अनि त्यागे विदेश जाने सपना !
सोंढेस्थित बुद्धसिंह मार्गको छेवैमा टकबहादुर र मखनले जग्गा भाडामा लिएर च्याउखेती गर्नुभएकाे छ । पाँच वटा टनेल बनाएर जापानीज ब्ल्यु क्याप र अ‍मेरिकन ब्ल्यु क्याप जातको च्याउबाट मनग्गे आम्दानी भएको टकबहादुरले बताउनु भयो ।
एउटा टनेल निर्माण गरि च्याउ उत्पादन गर्दासम्म ९० हजार रुपैयाँ खर्च हुने र त्यसबाट डेढ लाख जति अम्दानी हुने उहाँले बताउनुभयो । पाँच वटा टनेलबाट एक पटक करिब ३ लाख रुपैयाँ जति नाफा हुने उहाँको भनाइ छ ।
विदेशको भन्दा स्वदेशमै राम्रो कमाइ भएपछि मखनले विदेश जाने सोच त्यागिसक्नुभएको छ । विदेशको भन्दा राम्रो कमाइ आफ्नै घरमा बसेर गर्न सकिने भएपछि विदेश जाने सोच अन्त्य गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
अहिले रोजगारीका लागि विदेश जाने सोचाइमा रहनुभएका अन्य युवाहरुलाई पनि उक्त सोच अन्त्य गरी व्यवसायिक खेती र पशुपालनमा लाग्दा उपयुक्त हुने उहाँले सुझाव दिनुभएको छ । च्याउ तथा तरकारी खेतीकोलागि अहिलेसम्म कुनै तालिम र प्रशिक्षण नलिएको तर पनि व्यावहारिक प्रयोगले सफल बन्दै गएको उहाँले बताउनुभयो । च्याउ खेतीका लागि उहाँहरुलाई व्यास नगरपालिकाले बिउमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको छ ।
Next आयो लोडसेडिङको तालिका, दिनमा ३ पल्टसम्म बती जाने !